Plitvice Lakes: Fairytale Croatia | Absolut Kufamba
Plitvice Lakes: Fairytale Kroatia
Alberto Makumbo | | Updated on 11/04/2019 09:40 | Croacia
Mumoyo weCroatia pane nzvimbo inopfuura zviroto zvako zvakanakisa: makomo akafukidzwa nemiti yebeech, matenga-bhuruu makungwa uye mapopoma anokukurudzira kuti uzvirasire iwe mune yakasarudzika yekufamba trance. Usapotsa kushanya kwedu kweiyo Plitvice Lakes National Park.
1 Pfupiso sumo yePlitvice Lakes
2 Kushanyira Plitvice Lakes National Park
3 Gara mupaki
Pfupiso sumo yePlitvice Lakes
Ukadonha ne Lika nharaunda, kumucheto wepakati-kumabvazuva kweCroatia, unogona kushamisika. Unogona kuyambuka zambuko rebhiri uye unosangana nehove diki dzinoshambira mumvura dzebhuruu risinganzwisisike, yeiyo hue inoita kunge yakafanana neyekurota. Uye kana iwe ukatarisa kumusoro, iwe uchaona kuti madziva aya achingova mavambo, kune seti yemakomo uye makoronga akafukidzwa nehuswa uye mapopoma anotubuka kubva kwese kwese. Welcome to Plitvice Lakes National Park!
Yatove yakaziviswa National Park muna 1949 uye yakasarudza World Heritage Site naUnesco muna 1979 ine chiwedzero chakafungidzirwa mugore ra2000, iyo Plitvice Lakes National Park ndiyo imwe yeakanyanya kunaka zviwanikwa sezvaunopfuura nemunyika yemashiripiti inonzi Croatia.
Nzvimbo inosvika 30 zviuru mahekita ayo makumi maviri nemaviri akafukidzwa zvizere nesango, kunyangwe nzvimbo inogona kushanyirwa nemufambi inopindirana neangangoita masere makiromita. Iko kunakidzwa kwepfungwa dzeavo vanouya kuCroatia vachitsvaga mufananidzo unopfuura zvese zvavanotarisira.
Inofungidzirwa seimwe ye nzvimbo dzakanaka kwazvo pasi rese (zvirokwazvo, aive mukwikwidzi kuti ave mumwe we Zvinomwe zvakasikwa Zvishamiso zveNyika), Plitvice Lakes National Park ine kusvika Makungwa gumi nematanhatu nemapopoma, kunyangwe 90% yehuswa hwayo yakaumbwa kunyanya yebeech.
Bindu remichero rakasarudzika rinokukoka iwe kuti utore nzira nomwe dzedingindira dzinogona kuve gwara rakanakisa kana zvasvika pakurasika muparadhiso ino Pasi.
Kushanyira Plitvice Lakes National Park
Pakushanyira iyo Plitvice madhamu, maguta maviri epadyo epasi kuita kudaro Zagreb, iri makiromita 138, uye Zadar, makiromita zana nemakumi mashanu. Nzvimbo dzese dziri mbiri dzakanaka kana uchienda kupaki, kungave nebhazi (BusCroatia uye yayo makumi mairi euros tikiti rekufamba rwendo isarudzo yakanaka) kana nekuhaya mota, nekuti chinhambwe chakafukidzwa mumaawa maviri uye mupaki pachayo zvinogoneka paki.
Iyo yakasarudzika paki maawa anobva kubva 8 mangwanani kusvika 6 masikati, saka kusvika kunzvimbo yekutanga chinhu mangwanani kunokurudzirwa, kunyanya kana iwe uchida kutsvaga nzvimbo munzvimbo yekupaka uye chengetedza mitsara mirefu.
Zvinoenderana ne nguva yakanakisa yekushanyira Plitvice LakesIchi chirimo kana matsutso, iyo yekupedzisira kunyanya nekuda kwechiitiko chevaravara chinowanikwa nemiti yebeche.
Uye icho ndechekuti chiteshi chakanyatso kubatana nehukuru, asiwo nemitengo yepaki. Kana iwe ukafunga kushanyira iyo mumwaka wakaderera, pakati paGumiguru naMarch, mutengo uri 55 Croatian kuras (7.50 euros), nepo mumwedzi waApril, Chivabvu, Chikumi naSeptember mutengo uri 110 kuras (14.80 euros) uye muna Chikunguru naAugust 180 (24.22 euros).
Paki Iyo ine matikiti maviri uye iyo tikiti inosanganisira rwendo rwechikepe paLake Kozjak, yakakosha pane yakaoma, pamusoro pekupinda nechitima chikamu icho kusvikira mapinda maviri. Nekudaro, mepu inoratidza iyo yavanokupa iwe pamusuwo inosanganisira nzira nomwe dzaunogona kutora zvichienderana nenguva yako uye zvinokwezva zvaunoda kushanyira.
Panyaya yekusarudza yekutanga kupinda, iwe unozokwanisa kufamba pakati pemadziva ekudzika kumusoro kusvika kumagumo murwizi rwePlitvice rwizi, urwo nemamita makumi manomwe neshanu kukwirira kuri chiitiko chinoshamisa. Kune chikamu chayo, iyo yechipiri yekupinda inotarisa zvakanyanya pamusoro pemakungwa ekumusoro, ichijekesa iyo Proscansko, iyo yepamusoro pese, kana iyo Labudovacpor mapopoma, ese ari maviri anoshamisa Chero zvazvingaitika, chitima chambotaurwa chinotibvumidza kubatanidza masuo maviri kana kusvika kune isu atinosarudza.
Paunenge uchinge uri mukati, iwe unofanirwa kungozvigadzirira kunakidzwa nenzvimbo yemashiripiti iyo mapopoma anobuda kubva kumativi ese, nyanza dzinomutsa bhuruu risingaenzanisike uye hunhu hwakazara nezviuru zvinonakidza zvinoshamisira.
Kushanyira kune hombe Plitvice nyanza, iyo huru, iyo iyo yakakurumbira chikepe chemagetsi inopfuura nepakati, kana kurasika mukunyarara kunokokwa nemigwagwa yematanda inofamba-famba mupaki, ichikubvumidza iwe kuti uwane maonero akakosha edziva.
Kubva kuDubrovnik, iyo nharaunda yePlitvice Lakes ndeye makiromita mazana mana, saka pfungwa ye gara mupaki kwemazuva mashoma Zvinoita kunge zvakakwana kwauri kana zvasvika pakuziva zvese zvaro zvisina kukurumidza uye pazororo rako.
Panyaya yekuita izvi, zvinokwanisika kutenga isingadhuri-mazuva maviri tikiti iwe uchisarudza mahotera ari pedyo saGrabovac, imwe yedzimba dzakakurumbira munzvimbo iyi. Panguva imwe, iyo paki pachayo ine nzvimbo dzekudzika musasa yakaumbwa nema bungalows kubva mawo ekuti uwane maonero asingakundike emakungwa nemasango ebeech.
Chekupedzisira, hatigone kukanganwa nezve mukana we idya mune imwe yeresitorendi kushandira chikafu cheCroatia chiri padyo nemadhamu. Pakati pavo, zvakakosha kuratidza huvepo hweKozjacka Dragga Buffet, yekudyira-yemhando yekudyira paLake Kozjak yakanaka kudzoreredza mabhatiri ako iwe uchipedzisa chako chiitiko.
Sezvauri kuona, iyo Plitvice Lakes Natural Park iparadhiso yakanaka pachayo yekushanyira panguva yekuenda kuCroatia yakanaka. Zvimwe kubva kuDubrovnik, Zagreb kana Zadar, kana kusarudza kwemazuva maviri akarasika pakati pezvisikwa, kushanyira imwe yenzvimbo dzakanakisa dzepanyama muEurope inofanirwa kutariswa kwako kuzere kuitira kuti ruzivo rwacho ruve rwakakwana.
Ungade here kushanyira Plitvice Lakes National Park?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Plitvice Lakes: Fairytale Kroatia
Zvinhu zvaunogona kuona nekuita zvemahara muNew York
Maitiro ekuronga zororo remhuri